Chaiyo Simba 630watt COB 3000W Kukura Chiedza China Manufacturer
Tsanangudzo:630watt COB CATULE ISU Kukura Chiedza,COB 3000W Kukura Chiedza,Phlizon 630watt COB LED
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L6Chaiyo Simba 630watt COB 3000W Kukura Chiedza
Chaiyo Simba 630watt COB 3000W Kukura Chiedza
PHLIZON Chaicho Simba 630watt COB 3000W LED Chigadzirwa Yakakura Chiedza
Iine chaiyo simba dhizaini ye625 wats iyo Philzon Cree COB Series 3000w ine simba LED kukura mwenje neinopfuura mwenje wakakwana kumera chero chirimwa.
Iyo Phlizon COB Series 2000w LED inokura yakareruka (uye ihama yayo 1000w mudiki uye 3000w mukoma mukuru) inorova chero mwenje wakafanana wemutengo.
Iyo Phlizon COB yakateedzera iri imwe nyaya. Iwo akanakisa akadzika-bhajeti mwenje parizvino pamusika. Iwo akafanana chaizvo neOptic magetsi mwenje, asi iwo anodhura mashoma uye anokupa zvimwe kuburitsa.
Phlizon inonyatso kuzivikanwa LED ikure mwenje kambani inotengesa mutsara izere wemakwenzi ekudyara mwenje. Iyi Phlizon 3000 watt COB inokura mwenje ndiyo yakasimba muenzaniso mune yavo COB LED inokura mwenje mhete.
Chiedza ichi chine masherufu epamusoro CIRO COB yakafukidzwa nemarata ekuwedzera anoonekwawo pane maviri ekutanga anokura mwenje mune ino chinyorwa. Iyo COBs inotsigirwa ne143 inotsigira LED chips yakaisa ichi mwenje kumusoro kuti ive yakanakisa COB LED inokura mwenje pane
musika, zvese zvinotariswa.Chiedza chinodzorwa nema swithes maviri: Imwe switch ndeye Veg uye Bloom zvikamu, uye imwe switch yacho yakanyorwa yakasimba, iyo inokanganisa mwenje wako kuzere simba rekubhururuka.
Phlizon 3000 Watt Spectrum & PPFD:
Ino 3000 watt COB LED inokura mwenje unoburitsa svumbunuro huru iyo yakakwana kune ese matanho ekukura kwechirimwa. Iyo spectrum ine yakakwira bhuruu, huwandu hunofungidzirwa hwegirini wavelength iyo inosimudzira kukura kwechirimwa¹, pamwe neizere tsvuku wavelength iyo
inokurudzira kukura muchikamu chinoyerera.
Mukuwedzera, iyo Phlizon 3000w COB LED inokura mwenje`s kuwoneka kunosanganisira Ultraviolet uye infrared wavelengths. Ultraviolet mwenje yakawanikwa kuti iwedzere mazinga eTHC mumakwenzi e cannabi. Infrared inobatsira nekupinza pasi pegurokuro, ichikurumidza
inoyerera, uye yakawanda goho. Zvese mune izvi zvese chiyedza chechokwadi chinoonekera.Ichi 3000 watt COB LED inokura mwenje ichadhonza 629 Watts kubva pamadziro ako. Kana zvasvika pakupisa, iyi mwenje iri kune basa rekuibvisa nekukurumidza. Iyo Phlizon 3000w inoratidzira 6 inotonhorera mafani kumashure kwepaneli, uye inodzivirira kumativi ese kumativi.
Warranty & Owner Comments:
Phlizon inopa makore maviri waranti pane ino yekukura light.Taverenga kuburikidza neye zvese muridzi wongororo uko, imwe chete yaive nenyaya yaive yakafukidzwa newarandi. Vamwe vese vakagutsikana kwazvo uye vakanzwa sekunge vane mari zhinji. Chimwe chikonzero varidzi vanofarira kwazvo pamusoro peizvi Phlizon COB inokura mwenje ndeyekuti ivo vanopa toni yakakosha kune yakabuda. Iwe uri kuwana COB LED nemaremani uye 2500+ PPFD yehafu mutengo wemhando dzinodhura dzemhando dzakawandisa nemateki akafanana.
CHII CHINOTAURA ANOGADZIRA ISU YEMAHARA KUKUKWIRA?
2 .Actual Power: Nekuti iwo chaiwo masimba echiedza chirimwa chinosiyana nemamiriro akasiyana, vese vatengesi veAmazon vanoshandisa iro rakapihwa simba kurondedzera masimba echigadzirwa nekuti iro rakaganhurirwa simba rinogara riripo. Paunosarudza LED ichikura mwenje, rakavhenganiswa simba rechiedza chiratidzo, uye chakanyanya kukosha isimba racho chairo.
3.Core Coverage: Pamusoro peiri pamusoro, paunosarudza chiyedza chechiyero , unofanirwawo kuenzanisa nzvimbo yekuvhara yemarambi akasiyana emuti, hongu, ukuru hwenzvimbo yepakati yekuvhara. Kazhinji, mudanho rekumera, unogona kusungira iwo muti wechiedza kumusoro uye nzvimbo yekuvhara yakakura. In inoyerera chikamu unogona kuturika chirimwa chirimwa pazasi uye nzvimbo yevhavha idiki nekuti chirimwa chinoda yakawanda mwenje panguva ino. Iwe unofanirwa kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana dzekuvhara kusarudza iyo chirimwa chechiedza chinokodzera iwe.
Phlizon inonyanya kukoshesa LED inokura marambi emhando dzakasiyana sekurapa, hurumende, mauto, kutengeserana, uye kurima.
Shenzhen Phlizon Technology Co, Ltd ndeye China yakavakirwa LED mwenje kambani yemakore. Isu tinoedza kupa ichangoburwa teknolojia yeAD uye takabatana nemamwe mazita makuru muindasitiri iyi. Isu takanzverwa, kugadziridzwa uye kugadzira LED inokura mwenje kwemakore, uye isu tiri kudyara chitsva chitsva muna 2018 kuti titore zvirinani LED yedu kukura mwenje mhando uye ive nechokwadi chekuti ivo vanogona kusangana neEC uye ETL standard. Nezvigadzirwa zvedu, isu tinokwanisa kuvandudza mashoma emagetsi, kupisa kunyura kupisa uye yakakwira PAR kuburitsa. Isu tinopa akasiyana siyana eULE anokura mwenje mhando dzevatengesi vanodyara, kudyara hobby lover etc. Iwo ma LED anokura mwenje vanoshandisa optimum kuonekera kuendesa mwenje izvo zvidyarwa zvinodiwa pasi pemasikati ezuva, kuitira kuti zvidyarwa zvikure zvinokurumidza, zvine hutano nemhando yepamusoro. Ndapota Don `T vanozeza kutaura nesu kana uine hombe kukura chiedza zvinodiwa.
Dyara Kura mureza we 4x4 tende Amazon Bata Ikozvino
Yakanakisisa COB Kura Chiedza Kit 2020 3000W Bata Ikozvino
Veguva Cree Cob Cob Kura Chiedza Bata Ikozvino
Yakakurumbira COB LED Kura mwenje Amazon Bata Ikozvino
3000 watt COB LED Kura Chiedza Bata Ikozvino
Phlizon Yakazara Spectrum Yakatakura Kukaedza Mwenje COB System Bata Ikozvino
Yakazara Spectrum COB Kura Mwenje Ino nyore Kuisa Bata Ikozvino
Inodhura COB Yakatakurwa Kukura Chiedza Phlizon Ne Fan Bata Ikozvino
630watt COB CATULE ISU Kukura Chiedza
COB 3000W Kukura Chiedza
Phlizon 630watt COB LED
2000w COB CIR Kukura Chiedza
Optic COB LED Kukura Chiedza